Ndiqala njani ukukhangela umcebisi we-SEO?
Ukuba usanda kuvula iwebhusayithi yakho kwaye ungenayo nabathengi kunye nentengiso, isizathu sinokuba sinye kuphela - isayithi ayibonakali kubasebenzisi bokukhangela kwaye emva koko abasebenzisi abasebenzisa i-SERP. Ukubonakala kweyona injini yokukhangela ingabalulekiyo kubalulekile ekuphuculeni isitratti kwisayithi lakho, oku kungakhokelela ukwandisa ulwazi lwezentengiso kunye neengeniso eziphezulu. Ukuba awunaso ixesha kunye nolwazi lokuphucula izikhundla zakho zeewebhusayithi, ngoko ke unokukhetha ukuba ungabhekisela kumcebisi we-SEO okanye inkampani.
Inkqubo yokufumana, ukukhetha nokuqeshisela umcebisi we-SEO oqhelekileyo uye waba ngumsebenzi onzima kubaphathi bewebhu kunye nabaphathi bokuthengisa - formal style dresses. Ngaphandle kokuba unako ukufumana izikhokelo ezibalulekileyo kwi-intanethi yakho, inkqubo yakho yokusesha umboneleli we-SEO oza kuqala uya kuqala.
Iindlela zokufumana umcebisi we-SEO
Kulo mhlathi, uya kufumana izinto ezibalulekileyo zokuqesha umboneleli weenkonzo ze-SEO onokukunceda ukuba ukhuphule imali yakho kwaye uvuselele ukubuyisela imali (ROI).
Dlulisa amehlo kumnxeba ukufumana iziphakamiso
i-Google inokusebenza njengesangqa sangaphakathi sithemba ngexesha lokukhangela. Kukho uluhlu lweenkampani ze-TOP SEO ezikhoyo kwiGoogle. Ukongezelela, unokufumana iziphakamiso kunye nokuxhaswa kwabacebisi be-SEO ukuba ezinye iingcali ze-SEO kunye nabaxhasi abanelisekileyo kwinethiwekhi yakho baye basebenza kunye. Unokufumana ukuhlaziywa kwi-arhente ze-SEO okanye abacebisi kwiindawo ezithile zokuhlaziywa ezizodwa ezifana ne-WOT okanye iTrustpilot. Kucetyiswa ukuba ukhangele i-consultant ye-SEO kumaziko aseburhulumenteni, ikakhulukazi i-LinkedIn, kunye ne-Twitter. Apha ungafumani nje iingcali kwi-optimization sphere kodwa nabantu abasanda kusebenzisana nale ngcali.
Hlola ukuhlolwa kweengcali ze-SEO kumaziko e-third party
Kukho iindawo ezininzi zokuhlaziywa ezinokuthenjwa apho abathengi banokushiya izibuyekezo zabo malunga nenkampani yokusebenza kunye neengcali. Ezi ziphazamiso zidla ngokunyanisekileyo, kwaye umgangatho njengabantu ababahambayo ababonakali banomdla kwi-SEO yenzuzo yenkampani. Phanda iintlobo zabathengi abathile abacebisi be-injini yokuphenya ngokusebenza nabo baye basebenzisana nabo, uhlobo lomsebenzi okwenziwayo, kwaye iziphumo zaphunyezwa.
Ukutyelela iintlanganiso zeengcali ze-SEO kunye neenjini zolungiselelo lwenjini
Indawo efanelekileyo Ukudibanisa ubuso nobuso kunye nomcebisi we-SEO wakho wexesha elizayo kwi-MeetUps kunye neeforamu zendawo. Apha ungabambisana nomntu kwaye umbuze imibuzo malunga nokulungiswa kwewebhusayithi kwaye khangela ukuba ngaba umcebisi angakunceda ukuba ufezekise iinjongo zeshishini lakho okanye.
Ukujonga izikhalazo zeblogi ukufumana umcebisi we-SEO ofanelekileyo
Ukufumana umcebisi we-SEO oqeqeshiweyo othetha ulwimi oluqondakalayo, unokufunda into abhala ngayo kwiblogi yakhe. Kuya kukunceda ufumane umdlalo olungileyo ngokusekelwe kwimihlobo yomsebenzi ofuna ukuyenza. Funda kuphela ezo zithuba zeblogi ezihambelana nolunye uhlobo lweenkonzo zokulungiselela ukwenziwa kwindawo yakho.